Umkhiqizi kanye neFektri Engcono Kakhulu Yesilayidi | AmaMede
Iwindi le-MDTC152A esishelelayo
Idizayini entsha yenza isikhala sivumelane nezimo kakhudlwana! Abantu abathanda ukuslayida iwindi cabanga ukuthi kulula, inikeza umbono ongcono nomoya omncane, futhi konga isikhala. Labo abangayithandi bacabanga ukuthi kubi ekuvalweni futhi ukusebenza komoya ukumelana. Ngenkathi umklami weMEDO ethuthukise i- ngenhla pro futhi siguqule i-cons ukuze kudalwe ukuslayida kwe-MDTC152A iwindi.
Semi okuzenzakalelayo uvala uhlelo
Ukuvala okuzenzakalelayo okuzenzakalelayo
Semi okuzenzakalelayo ukukhiya uhlelo futhi eyingqayizivele keeperless Uhlaka break ngokusebenzisa indlela yokuvala iwindi yendabuko.
Invisible fly mesh, design slimline
Umugqa wendiza ocashile. Iphaneli yengilazi entsha kanye nesakhiwo sokuxhumanisa se-flynet ukwakheka. I-sash efihliwe, i-interlock encane kakhulu. Esimanjemanje futhi sicocekile bheka. Ukubuka kwephaneli.
Idizayini yomuntu, umsebenzi we-anti jika
Ashintshekayo anti jika roller
Kunethezeka futhi uphumule uncike kwi-armrest lapho ubuka i- ubuhle bendawo. I-anti-swing roller eguquguqukayo yenza ukuslayida kuzinze kakhudlwana futhi bushelelezi.
I-sash efihliwe inikeza umbono we-panoramic. I-Anti-dusting nezinambuzane ubufakazi obufihliwe i-flynet ingasindisa kakhulu imizamo yokuhlanza.
Amaphrofayli Wemisebenzi Eminingi Ukufaka Inani Lamaklayenti
IMEDO inezinketho eziningi zephrofayili esizayo yokwengeza imisebenzi eminingi kumawindi naseminyango, ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ezahlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, iMEDO inethimba eliqinile le-R & D ukwenza ngezifiso isisombululo somsebenzi okhethekile wephrojekthi.
Uhlaka oluncane kudizayini ye-slimline:
Njengoba abantu besimanje bakhetha amawindi futhi iminyango ngosayizi abakhulu ngokubuka okungcono futhi ukukhanyisa.
Amasistimu we-MEDO slimline ane-narrow ozimele basanelisa kahle lesi sidingo.
Izingxenyekazi zekhwalithi ephezulu:
Iwaranti yeminyaka eyi-10 yehadiwe, okuyi izinga eliphakeme kakhulu embonini.
Izingxenyekazi zekhompiyutha zeMede, uhlobo lweJalimane i-hardware ne-US brand hardware yilezi iyatholakala.
Izitayela ezahlukahlukene zokubamba ziyatholakala.
Insizakalo yokwenza ngokwezifiso iyamukelwa.
Ama-gaskets ethu enziwe nge-premium engenisiwe izinto zokusetshenziswa zokwenza kahle kakhulu ku ukubekwa uphawu, ukumelana nesimo sezulu kanye nobufakazi bokuguga.
I-One-Stop Service kanye ne-technical Solution Provider
IMEDO inikeza insiza yokumisa kanye nezixazululo ezingcono ukuhlangabezana nezimo ezihlukile nezidingo zamakhasimende. Nge base ukukhiqizwa e Foshan China, MEDO ujabulela izinzuzo umkhakha mkhuba, supply chain, izindleko kanye zokuhamba njll.
Langaphambilini Slim Lift & Slide Uhlelo
Olandelayo: Uhlelo lwe-Slimline Sliding